Okooko osisi PNG | WatercolorPNG
Okooko osisi PNG
Mmiri mmiri na-emepụta 500 + mmiri
Akpanwu Akpanwu - $ 19.00
Akara ejiri mejupụtara: 1. 2 Poppies. Roses3. Tulips4. PeoniesIdeal ihe maka N'onwe Gị, akwụkwọ ịkpọ akwụkwọ agbamakwụkwọ, kaadị ekele, nza, blọọgụ, akwụkwọ akụkọ ...
African daisy Watercolor png klas nke faịlụ 87. Ezigbo ihe eji eme DIY, akwụkwọ ịkpọ òkù agbamakwụkwọ, kaadị ekele, ndetu, blọọgụ, ...
Red Roses ifuru Watercolor png
Roses Reds Watercolor png klas nke faịlụ 64. Ihe dị n'ime: - png 19 faịlụ, ihe ndị dịpụrụ adịpụ, 300 ...
Ifuru orchid na-acha ọbara ọbara Watercolor png
Watercolor na-acha ọbara ọbara orchid png klaasị nke faịlụ 29. Ihe dị n'ime: - png 5 faịlụ, ihe ndị dịpụrụ adịpụ, 300 ...
Red na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Psychotria elata ifuru Watercolor png
Psychotria elata Watercolor png klaasị nke faịlụ 28. Ihe dị n'ime: - jpg 28 faịlụ, usoro na okpokolo agba, ...
Ifuru aquilegia ifuru Watercolor png
Pink aquilegia Watercolor png klas nke faịlụ 66. Ihe dị n'ime: - png 18 faịlụ, ihe ndị dịpụrụ adịpụ, 300 ...
Ifuru osisi lavender ifuru Watercolor png
lavender Watercolor png clipart nke faịlụ 17. Ihe dị n'ime: - png 3 faịlụ, ihe ndị dịpụrụ adịpụ, 300 dpi, ...
Ifuru odo Pepe Pink
Peony Watercolor na clipart nke faịlụ 54. Ihe dị n'ime: - na faịlụ 7, ihe ndị dịpụrụ adịpụ, 300 dpi, ...
Ifuru Pureia ifuru Watercolor png
Freesia Watercolor png klas nke faịlụ 28. Ihe dị n'ime: - png 5 faịlụ, ihe ndị dịpụrụ adịpụ, 300 dpi, ...
A na-eme ka mmiri na-acha mmiri ọkụ na-emepụta PNG PNG
Mkpụrụ Flowercolor Flower Bouquet PNG setịpụrụ clipart nke faịlụ 32. Ihe dị n'ime: - na faịlụ 32, ihe ndị dịpụrụ adịpụ, ...
Na-egosipụta: 1-12 nke 563
Ihe ise mere ị ga-eji zụta ihe osise mmiri
A na-eweta usoro ihe eji emepụta mmiri na-emepụta ka ọ bụrụ ihe dị iche iche. Ọ ghọrọ akụkụ dị mkpa nke usoro okike dijitalụ. A na-emepụta ọtụtụ eserese site na ebuka kwa ụbọchị. Otú ọ dị, ọchịchọ nke clipart flower clip na-adị elu mgbe niile. Nchịkọta nke okooko osisi na-acha mmiri mmiri bụ ezigbo ihe atụ nke ihe dị gị mkpa maka ịmepụta ihe ndị dị n'ime ụlọ, akwụkwọ ntanetị, ihe ndị dị nro, uwe na ihe ndị ọzọ. Ha bụ ihe oyiyi a na-ese onyinyo, bụ ndị ndị na-eme ihe nkiri Ukraine na-ewu ewu. Mgbe ị na-azụta ụdị ọkpụkpọ mmiricolor nke ọ bụla ị na-azụ, a na-ahapụ gị ka ị jiri ha rụọ ọrụ maka nhazi nke ngwaahịa ndị a kwadebere maka ire ere.
Lee n'okpuru maka ihe ise mere ị ga - eji zụta foto ndị a na - acha mmiri mmiri na ụlọ ahịa anyị nwere ike ịnweta:
Anyị na-abụkarị ihe kachasị mkpa maka ihe osise kachasị mma na-ese onyinyo osisi. Anyị na-agbalị mgbe niile iji tụnyere àgwà dị mma na ọnụahịa dị mma. Ị ga-eju anya n'otú anyị si eme ihe na-enye afọ ojuju maka ndị ahịa anyị.
Nchịkọta a na-atụchapụta akwụkwọ ndị na-acha mmiri na-acha odo odo bụ nke ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị. E nwere ihe osise nke ụdị okooko osisi ọ bụla, ọkwá, aka na-ese eserese na ihe ndị e ji ede ihe, ụfọdụ anụmanụ na ọbụna nri. Ị nwere ike ịhọrọ otu mmewere (ọkachasị ọrụ) ma ọ bụ ngụkọta dum. Cheta, na ọ bụrụ na ịzụta ihe niile, ị ga-enwekwu ohere na echiche echiche maka ọrụ gị.
Anyị emeworị nnukwu mkpokọta botanical collection clipart. Otú ọ dị, anyị anaghị akwụsị ịkwalite onwe anyị ma gbasaa ọtụtụ ụdị ọrụ anyị na-enye. Nkwụghachi ụgwọ site na ndị ahịa na ihe nchoputa na nyocha nke ndị debanyere aha anyị nyere anyị aka ịbịaru oge.
Mgbe ịzụrụ ihe ọ na-echekwa na-echekwa na ngwaahịa ndị a natara ka ị nwee ike ibudata otu ihe osise nke okooko osisi ọtụtụ oge.
Ọ bụrụ na ị nwere usoro pụrụ iche na ọ siri ike ịchọta ihe ị chọrọ, ndị ọrụ anyị dị njikere inyere gị aka. Anyị ga-ahọrọ gị ụdị nke kachasị mma. Gwa ọchịchọ gị, ọ ga-aghọkwa eziokwu.
Olileanya ugbu a ị dị njikere ịmalite ịrụ ọrụ na ọrụ anyị! Nwee ohere a dịgasị iche iche nke ohere anyị na-enye gị!